$4 Indian Smartphones 'Will Ship this Week' - News Ọchịchị
$4 Indian Smartphones 'Ga-ụgbọ mmiri a Week’
Àjà ihe ọṅụṅụ dị ọnụ ala ịkụ Na Freedom 251 Android ekwentị na mbụ chere na ha bụ ojoro ga ụgbọ mmiri na ogbe nke 200,000 - Ma ụlọ ọrụ ga-eme ka ọnwụ na nke ọ bụla handset
Isiokwu a na-akpọ “$4 Indian smartphones 'ga ụgbọ mmiri n'izu a'” e dere site Samuel Gibbs, n'ihi na theguardian.com on Monday 27 June 2016 10.53 UTC
The $4 Indian ekwentị na ụfọdụ echiche nwere ike dịghị mgbe inwoghara kọrọ adịghị adị, kama ọ bụ naanị n'ihi na mmalite amị ọ na-eme ka a ọnwụ na onye ọ bụla.
The ịkụ Na Freedom 251, ibido mara ọkwa na a price nke £ 5, na o doro anya na ka ụgbọ mmiri a n'izu na-ahịa ndị preordered ekwentị na February n'ihi na - ($3.70 ma ọ bụ £ 2,77). N'oge ahụ price - onye na ụlọ ọrụ mbụ ekwele nkwa - ọ na-adịkwa ndị Indian mmalite td 150 ($2.2 ma ọ bụ £ 1,65) na nke ọ bụla smartphone.
Gbanyere mkpọrọgwụ n'obi Na nchoputa na onye isi Mohit Goel gwara Indian Express: "Anyị ga-a ọnwụ, ma enwere m obi ụtọ na nrọ nke ejikọta ime obodo na ndị ogbenye India dị ka akụkụ nke Digital India na Mee na India, atumatu a na-emezu na Freedom 251. "
The 3G Android 5.1 smartphone nwere a 4in ihuenyo, 8-megapixel n'azụ igwefoto, 3.2-megapixel selfie igwefoto, a 1.3GHz processor, 1GB nke Ram na 8GB nchekwa, na a microSD kaadị oghere maka agbakwunye ọzọ.
The ụlọ ọrụ na-ekwu na o nwere ihe fọrọ nke nta 200,000 Freedom 251s njikere ụgbọ mmiri, na atụmatụ emeghe iwu ọzọ n'ọdịnihu dị nso na ụgbọ mmiri 200,000 handsets a ọnwa, ọ bụ ezie na ụbọchị ọ bụla igwe e mere maka nnyocha.
ebe ọ bụ na February, Gbanyere mkpọrọgwụ n'obi Na okosobode amụba skepticism. Na igba egbe nke ekwentị ụlọ ọrụ gosiri mmeri a sịrị "prototypes", nke mesịrị bụrụ smartphones mere site ọzọ Indian emeputa na branding kpuchie.
A ọchịchị nchoputa mere ka a wakporo nke ụlọ ọrụ ahụ si n'ọfịs n'elu tax na enweghi asambodo maka ngwaọrụ a na mba telecoms regulator. Gbanyere mkpọrọgwụ n'obi Na bụkwa ebubo na n'ịghọ aghụghọ ule na egwu na emetụtaghị okwu ikpe n'elu rebranding nke Adcom smartphones.
Kwesịrị ịkụ Na-enwe ike ụgbọ mmiri a na-arụ ọrụ gam akporo ama ndị ahịa na 30 June dị ka atụmatụ, ọ ga-abụ nnọọ iheoma, ọ bụ ezie na ma a mmalite pụrụ ịkwagide adịkwa £ 330.000 a ọnwa na ya zubere Mbupu oge anọgide na-hụrụ.
Motorola Aims maka Indian buyers na ibu-ọnụ ala td 6,999 Moto E
'China si Apple' Xiaomi iwu si ere igwe na India
25599	5 Android, Nkeji edemede, India, mobile igwe, News, Samuel Gibbs, Smartphones, South na Central Asia, Technology, UK Technology, World ozi ọma
← Bose QC35 Wireless Ekweisi Review HP Spectre laptọọpụ Review [Na] →